အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ် ၂၀၁၆ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ် ၂၀၁၆	20
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ် ၂၀၁၆
Posted by kai on Aug 4, 2016 in Myanmar Gazette | 20 comments
– တိုင်းပြည်အတွင်း ၀င်ရောက်ခွင့်မရသည့် အမည်ပျက်စာရင်းတွင် ပါဝင်နေသော နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ၆၀၀ ကျော်ကို မြန်မာအစိုးရက ယမန်နေ့တွင် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီး အစိုးရသစ်၏ ရက် ၁၀၀ စီမိန်းကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်သည်။
“ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်းအရ ကျွန်တော်တို့ဟာ အမည်ပျက်စာရင်းမှာ ပါတဲ့သူ အရေအတွက်ကို လျှော့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ယမန်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ အမည်ပျက်စာရင်းမှ ၆၁၉ ဦးကို ဖယ်ပျက်ခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၄၈ ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသား ၃၇၁ ဦးပါဝင်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ကာ အမည်ပျက်စာရင်းတွင် စုစုပေါင်း အရေအတွက် မည်မျှရှိနေသည်ဆိုသည်ကိုမူ ဖွင့်ဟခဲ့ခြင်း မရှိချေ။
ထို့ပြင် ထိုအမည်များကို စာရင်းမှပယ်ဖျက်ရေးအတွက် ၀န်ကြီးဌာနပေါင်း ၁၅ ခုက ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol က အလိုရှိနေသော အကြမ်းဖက်သမားများ၊ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ အမည်များကိုမူ ပယ်ဖျက်သွားမည်မဟုတ်ဟု ဦးသိန်းဆွေက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
South China Sea: Beijing urges preparation for ‘war at sea’
15 hours ago – China’s defence minister Chang Wanquan has warned the military, police and the public to prepare fora“people’s war at sea” as tensions over …
ဂျစ်စူ says: ဘာပဲပြောပြော
အိုင်းစစ် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒေါ်စု လုံခြုံရေးအသိ ပိုရှိသွားစေလို့ပါ
ပေါ့လျော့နေရင် အိုင်းစစ် မခြိမ်းခြောက်ခင်
ခွက်ပျောက် တစ်စုရဲ့ လုပ်ကြံမှုကြောင့်
အဆင့်မြင့် ကျွမ်းကျင် လုံခြုံရေး တွေနဲ့
သွားသတိ လာသတိ ရှိနေပါစေလို့
ဂွဇက်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်မရှိသူ အမည်မဖော်လိုသူ
ဦးဦးပါလေရာ says: ISIS ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်စာ ဆိုတာကို မယုံပါဘူး… လို့ …
(အဲဒါကတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူ့အဖေတုန်းကဆို ဦးစောမို့ သေနတ်နဲ့သွားပစ်တာ။ တကယ်တော့ လည်ပင်းသွားညှစ်သတ်တောင်ရလောက်တယ်…)
ဘာတွေဆက်ဖြစ် – ဘယ်သူအမြတ်ထွက် -ဘယ်သူအရှုံးထွက် ????
ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်စုလုံခြုံရေးတိုးတက်လာတာတော့ ကောင်းတယ်..
Thint Aye Yeik says: အမေစု အသက်အန္တရာယ်က အခုမှ စာနဲ့ပေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်တာ ခံရတာပါ။
အရင် စစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်ကဆို လက်တွေ့ လုပ်ကြံမှုတွေ ခံခဲ့ရတာ။ ဆိုတော့. . .
ဒို့ကသာ အမေစု လုံခြုံရေးကို စိုးရ်မ်နေတာ။ လေဒီကြီးကတော့ ဒီလို ခြိမ်းခြောက်လည်း ဖြုံမယ့်ပုံ မပေါ်။ သူကိုယ်တိုင်က ဒီလမ်းကို ရွေးထားခဲ့သူမို့ သူ့ဖေဖေလို လုပ်ကြံခံရနိုင်တယ်လို့လည်း ကြိုတွေးထားမှာတောင် သေချာနေသေး။
.အခုပဲ ဒီရက်ပိုင်းထဲ ဒေါ်စု အခမ်းအနားတစ်ခုထဲ ဝင်လာတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို ကြည့်ခဲ့တာ။ ဒေါ်စုဘေးမှာ လောက်လောက်လားလား လုံခြုံရေး မတွေ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1379
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ISIS လို့ပဲ ထင်တယ်။ သူတို့ကို သွားလက်ကုတ်လိုက်တာက ပိုလွယ်တော့မပေါ့။ ဘာလို့ ကိုယ်ဝင်ခေါင်းခံနေဦးမလဲ။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ISIS တွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ ISIS တွေဟာမြန်မာပြည်ကို မျက်စိကျတယ်လို့ ဘယ်ထဲမှာလဲ မသိ ဖတ်ထားဖူးတယ်။ ဒီကောင်တွေဟာ ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်တယ်။ အဲလိုလုပ်ဖို့ ဘာသာရေးမာနက ပံ့ပေးထားတယ်။ ရန်သူကို လျှော့တွက်မိရင်တော့ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးတာပဲ။
kai says: HomeWorld Wikileaks confirms Hillary sold weapons to ISIS Wikileaks confirms Hillary sold weapons to ISIS
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တကယ်ကြီးလား အဲသတင်းက။ အံ့သြစရာကြီး
kai says: အမေရိကားရဲ့တကယ့်ဘစ်ဇနက်လေ..
စစ်တွေဖန်တီးမယ်..။ ၂ဖက်လုံးကို လက်နက်ရောင်းမယ်..။ ဆိုတော့..
မြန်မာပြည်တွင်းမယ် ဖြစ်နေတာကလည်း.. သဘောဆင်ဆင်ပဲ..။
ချိုင်းနားက.. တိုင်းရင်းသားဆိုသူတွေကို ဆွပေးပြီး.. ဟိုဖက်ဒီဖက်(အစိုးရ – သူပုန်) လက်နက်ရောင်းရင်း ဘစ်ဇနက်လုပ်တာပဲ..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချိုင်းနား/အမေရိကားသွားလိုက်ပြီး.. ညှိလိုက်(နိုင်)ရင် ပြည်တွင်းစစ်အကုန်ရပ်မယ်..။
ပြည်တွင်းစစ်ကို.. ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေနဲ့.. ညှိ၍မရ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1161
မှော်ဆရာ says: ဂလို သူများစီးပွားရေး ဒုတ်နဲ့သွားထိုးမယ်ဆို အပေးအယူ တခုခုတော့ ရှိရမယ်ထင့် …
စီလုတ်ကြီးက ဘာတောင်းမယ်ထင်သလဲ သူကြီး ….
kai says: အသိသာကြီးကိုရင်ရယ်…။
မြန်မာက.. ခွင့်ပြုသင့်တယ်..။ ဒါပေမယ့်.. နိုင်ငံရေးသမားကောင်းဆိုတာက.. Deal ညှိနှိုင်းတောင်းဆိုမှု တော်ရတယ်..။
ကိုယ့်ပြည်ဖက်ကို ရသလောက်ဆွဲပေါ့…။ အမေရိကားကြီးတနိုင်ငံလုံးနောက်က ရပ်ပေးထားတာ.. ကစားပေါ့..။ အမြတ်ရအောင်ကစားပေါ့..။
ကစားတတ်ရင်… မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရတာနဲ့အတူတူ.. ရေချိုနဲ့ လျှပ်စစ်ရောင်းစားနိုင်တဲ့.. ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဖြစ်မယ့်လမ်းပေါ်တန်းရောက်သွားမှာပဲလို့… တပ်အပ်ပြောလို..။
အဲ.. တိုင်းပြည်ချမ်းသာပြီ… ညူကလီးယားထိပ်ဖူးတခုလောက်ပိုင်ပြီဆိုရင်တော့.. ကျယ်ပေါ့…။
ညူထိပ်ဖူးတခုလုံး -င်ထဲဝင်အောင်ထိကျယ်စမ်းပေါ့.. Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: http://www.irrawaddy.com/interview/burma-is-already-a-game-changer-for-asean-kavi-chongkittavorn.html
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ရခိုင်မှာ သတ်ကြဖြတ်ကြတာတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားမပေးလို့ ဖြစ်တာလား။ တရားဥပဒေ မစိုးမိုး လို့ ဖြစ်တာလား။
တခြား တိုင်းပြည်တွေမှာ ကက်သလစ်နဲ့ နှစ်ခြင်း အတူယှဉ်တွဲ နေလို့ ရတယ်။ ဗုဒ္ဒ ဘာသာနဲ့ မွတ်စလင် အတူယှဉ်တွဲနေတဲ့ တိုင်းပြည်ရှိလား။ မွတ်များတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဗုဒ္ဒ ဘာသာ နေလို့ မရဘူး ထင်တာပဲ။ တိုင်းပြည် ဘယ်လိုရှာရမလဲ မသိ။ ဗုဒ္ဒဘာသာ များတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ မွတ်နေလို့ ရတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာကို အကောင်းပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာက ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ကို လူသတ် လက်အယဉ်ဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတာ။ ပြောချင်တာက ပုလင်းတစ်လုံးထဲမှာ ဆီနဲ့ရေ ရောထည့်လို့ ရတယ်။ အက်ဆစ် တွေ ရောထည့်လို့ မရဘူး။ ၂ဘာသာစလုံးက အက်ဆစ်တွေ။
ဗိုလ်ချုပ်က ဂျပန်တွေ ခေါ်သွင်းလာတုန်းက – သူခေါ်မသွင်းလည်း သူတို့ဖာသာ လာမှာပဲ။ ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှာလည်း ထွက်ပေါက်မရှိဆိုတဲ့ အနေအထားမှာ စေတနာအမှားလို့ ပြောလို့ ၇တယ်။ – ခုချိန်မှာ ဘယ်သူမှ အမှားတစ်ရပ်လို့ မသတ်မှတ်ပေမယ့် ဂျပန်တွေ ခေါ်သွင်းတော့ တိုင်းပြည်က ဘ၀တွေ အသက်တွေ ထောင်သောင်းချီပြီး ပေးဆပ်လိုက်ရတယ်။ သံဖြူဇရပ်ချွေးတပ် မှတ်တမ်းဖတ်ကြည့်ရင် လူတိုင်း သိပါတယ်။ အခု ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာလည်း သူတို့ ခိုးဝင် မ၀င်က ဘာမှ အရေးမကြီး။ ရှေ့ဆက် တွဲနေမလား ခွဲနေမလားက သာ အရေးကြီးတယ်။ အက်ဆစ်တွေကို ပုလင်းထဲ စုထည့်လိုက်ရင် ပြဿနာ တက်တဲ့အခါ အဲဒီ နိုင်ငံတကာက ဘာတာဝန်ယူမှာလဲ။
ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဥပဒေတွေ သုံးစားလို့ မရသေးပါဘူး။ ဥပဒေတွေက အမှန်တရားကို ကိုယ်စားမပြုသေးဘူး။ လုပ်စားစရာ လုပ်ကွက်အဖြစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဥပဒေတွေ မခိုင်မာသေးဘဲနဲ့ ပုလင်းထဲ ရောမထည့်ကြစေလိုပါ။
kai says: သိပ်မကြာတဲ့နှစ်တွေထဲမှာ.. ကမ္ဘာ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာကြီးတွေအားလုံး.. သွားတော့မယ်ထင်မိတာပဲ…။
ဗိုလ်ချုပ်ခေါ်မသွင်းပဲ.. သူတို့ဝင်လာတော့.. တိုင်းပြည်က.. အသက်တွေ သိန်းသန်းချီပြီး ပေးရမှာပေါ့..။
ဥပဒေတွေသုံးစားလို့မရသေးလို့ဆိုပြီး.. အမှန်တရားကို မလုပ်ရင်တော့..။
ဥပဒေတွေက.. ဘယ်တော့မှ(ဘယ်တော့မှ) သုံးစားလို့ရလာမှာမဟုတ်..။
အဲလိုလေးလဲ.. တွေးကြည့်စေချင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သွေးချောင်းစီးမယ့် ကိစ္စကို ဒီလောက်လွယ်လွယ်ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဖြစ်လာရင် ပြည်မက မွတ်တွေက ပိုခံရဦးမယ်။ တရားမျှတမှုဆိုတာ သူတို့ကို နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးမှ မဟုတ်ဘူး။ တွဲနေမှ မဟုတ်ဘူး။ ခွဲနေလည်း ရတာပဲ။ မွတ်တွေသာ ကောင်းရိုးမှန်ရင် ဒီကနေ့ ISIS ဆိုတာ ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေတွေ သောက်သုံး ကျမလာခင် ဒီဘက်က လူတွေက ဘယ်လောက်တောင် ခံရဦးမလဲ မသိ။ အဲဒီ မောင်းတော ဘူးသီးတောင်နယ်ကိုသာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နယ်အဖြစ် ပေးလိုက် ပြီးရော။
လူဦးရေ ထိန်းချုပ်မှုကိုလည်း အရေးကြီးတယ် ထင်တာပဲ။ သားသမီး ၄ယောက်ကို များတယ် ထင်တယ်။ ၂ယောက်လောက်ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ အရင်တုန်းကတော့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဆိုတာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အဖြစ် ယူဆခဲ့ဖူးတယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ လူ့စွမ်းအားက တန်ဖိုးရှိနေတာ မဟုတ်ဘူး။ လူ့ဦးနှောက်ကပဲ တန်ဖိုးရှိနေတာ။ လူရဲ့ ကာယပိုင်း စွမ်းအားအတွက် စက်မှုတော်လှန်ရေး ခေတ် ပြီးသွားတာ ကြာပါပြီ။ ဘာပညာမှ မတတ်တဲ့အပြင် ဦးနှောက် ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်၊ ဘာသာရေး မှိုင်းမိနေတဲ့လူတွေ ဆိုတာ လောကကို ကောင်းကျိုး မပေးနိုင်ပါဘူး။ ၀န်ထုပ်မျှသာ ပါပဲ။ ဒါကို ၀န်ထုပ် မဟုတ်ဘူး။ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဆိုရင် ခေါ်ကြပါလေ။ နိုင်ငံတကာကနေ။
ဖတ်ဖူးသလောက် ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ မွတ်များတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဗုဒ္ဒ ဘာသာ မရှိပါဘူး။ များသောအားဖြင့်ကတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာကို မွတ်က မျိုတာချည်းပါပဲ။ မွတ်အများစု ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဗုဒ္ဒဘာသာ ၂သန်းလောက် ခေါ်သွင်းမလား။ အခုက မွတ်နဲ့ ဗုဒ္ဒ ဘာသာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းသလဲ ဆိုတာကို ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေး အထိမခံလွန်းတဲ့ နှစ်ဘာသာကိုမှ ဆွဲစိဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ။ သွေးချောင်းစီးတော့ သူတို့ လက်နက်ရောင်းပြီး ငွေရှာမှာပေါ့။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေလည်း ထိန်းချုပ်ပြီးဖြစ်တာပေါ့။
kai says: အိုင်းစစ်စ်တွေက.. သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာမှမဟုတ်တာပဲ..။ ယူအက်စ်ကဖန်တီးလို့ဖြစ်လာမင့်ဟာ..။
အိုင်းစစ်စ်သတ်လို့သေတဲ့.. မွတ်စလင်က.. ဒုက္ခရောက်တဲ့ မွတ်စလင်က.. တခြားဘာသာခြားတွေထက် အဆပေါင်းများစွာပိုပါတယ်..။
အခုအိုင်းစစ်စ်ကို အသက်တွေရင်းပြီး.. ပြန်ခုခံမျိုးဖြုတ်နေတာကလည်း.. မွတ်စလင်တွေပါပဲလေ..။
အနောက်ဖက်ကမ်းပြည်နယ်မှာ.. ဘာသာရေးအပါအ၀င် ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာတာ.. ဒေသခံတိုင်းရင်းသားရခိုင်တွေကြောင့်ပါ..။
ရခိုင်လူမျိုးတွေက.. လွတ်လပ်ရေးလိုချင်တယ်..။ ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံလိုချင်တယ်လေ..။
ရိုဟင်ဂျာ..၊ဘင်္ဂလီဆိုတာ.. မျက်နှာဖုံးတခုသာပါပဲ..။ ဘင်္ဂလီတွေမရှိတော့ရင်လဲ.. ဗမာနဲ့ပြဿနာတက်မှာပါပဲ..။
အဲဒီဒေသမှာ.. ဂက်စ်တွေထွက်.. ဒေါ်လာဘီလီယံချီဝင်ငွေရတာ.. ဆိုင်ရာဒေသက.. ဘာရလို့လဲ..။
ဗမာတွေ.. အစိုးရတွေက.. မတရားအကုန်သိမ်းတာကိုး..။
မျှမျှတတ တွေးကြည့်စေချင်..။ Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: China Xinhua News
ပြည်ပ ကြွေးမြီ ဒေါ်လာသန်း ၈၇၀၀ ကျော် ပေးဆပ်ရန် ကျန်
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်ပမှ ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၈၇၀၀ ကျော် ပေးဆပ်ရန် ကျန်ရှိကြောင်းဟု စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ယနေ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည်။
“နိုင်ငံ ၊ အဖွဲ့ အစည်း အလိုက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ ပြည်ပချေးငွေ လက်ကျန်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၀၈၆.၇၉၆ သန်းဖြစ်ပြီး ပေးဆပ်ပြီးသည့် အရင်းငွေ ၃၄၄.၃၁၆ သန်းနှင့် အတိုးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ၂၂၇.၇၄၆ သန်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီး ပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါ ချေးငွေများမှ ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၉၀.၃၃၆ သန်း ထုတ်ယူ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်းလည်း ဝန်ကြီးက ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ပေးရန်ရှိ ကြွေး ဒေါ်လာ ၉၀၈၆.၇၉၆ သန်းအနက် ၃၄၄.၃၁၆ သန်း ပေးဆပ်ပြီးဖြစ်၍ ၈၇၄၂.၄၈ သန်း၊ သို့ မဟုတ် ၈.၇၄၂ ဘီလီယံ ပေးဆပ်ရန် ကျန်သေးကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ချေးငွေများသည် ငွေကြေး အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးအလိုက် စာရင်းပြုစုထားပြီး ၂၀၁၆ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ရှိ နိုင်ငံခြား ငွေလဲနှုန်းဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တန်ဖိုးဖြင့် တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပ ချေးငွေနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေအနေ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ မှတစ်ဆင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ရုံးသို့ ပေးပို့ ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒုတိယဝနကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြောခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ချို၏ ပြည်ပ ချေးငွေဆိုင်ရာ မေးခွန်းကို ၎င်းက ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မေးခွန်းတွင် ပါဝင်သည့် ပြည်ပ ချေးငွေ ပေးချေသည့် စနစ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးက ဆက်လက်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ချေးငွေ စာချုပ်တွင် ချေးငွေ သက်တမ်း၌ ဆိုင်းငံ့ကာလ ကိုပါ ထည့်သွင်းထားရာ ထိုဆိုင်းငံ့ကာလအတွင်း ချေးငွေ ထုတ်ယူ သုံးစွဲသည့် ပမာဏအပေါ်တွင်သာ ကျသင့်အတိုးကို ပေးရပြီး ဆိုင်းငံ့ကာလ ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ကျသင့်အတိုးအပြင် အရင်းကိုပါ အရစ်ကျ ပေးဆပ်ရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
kai says: Just 4.2 light-years away,arocky, Earth-like planet is found, and it may have water
August 24 | http://www.latimes.com
“It’s the closest star. It hasapotentially habitable world — I just think it’s amazing,” said Cornell astrophysicist Lisa Kaltenegger, who was not involved in the discovery . “This is just suchagreat exciting time to live in because we’ll figure out how we fit into all of this — and hopefully, also, if we’re alone in the universe.”
Proximaborbits Proxima Centauri, the third wheel to the binary star pair known as Alpha Centauri AB. As its name suggests, Proxima Centauri is the closest star to our solar system, sitting just 4.2 light-years away. But as an M-dwarf —adim, red, low-mass star — it can’t be seen from Earth with the naked eye. It has just 12% of the sun’s mass and 0.15% of its luminosity.
kai says: Monday 22 August 2016 06.00 EDT
kai says: Boy in the Ambulance: Haunting Image of Syrian Child Shows Horrors of Civil War
Inae OhAug. 18, 2016 11:18 AM
kai says: ဖဘ က.. Moe Kyawkyaw ဆိုတဲ့စာရေးသူ.. မနှစ်ကတင်ထားတဲ့ပို့စ်လေးပြန်ရှယ်နေကြတာတွေ့လို့.. ကြိုက်လို့ကူးတင်ထားတာပါ…။
စနစ်ကြောင့်… မဟုတ်..။ ==
ကျုပ်တို့တိုင်းပြည် မတိုးတက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းထဲက အရေးအကြီးဆုံးအချက် တခု ဒီပုံကြည့်ပြီး သိနိုင်ခဲ့ပါသည်
တရွာလုံး ကမ္ဘာ့မြေကြီးဆွဲအားဖြင့်အားလုံးစွမ်အင်မလိုပဲသုံနိုင်အောင် တရွာလုံးရဲ့အမြင့်မှာကန်တည်ထားပေးပါတယ်
ကန်နဲ့နီးသူတွေက ပိုက်လိုင်းသိပ်မဝေးလို့ ငွေ အချိုးကျမထဲ့နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါပြီ
ဝေးနေတဲ့သူတွေကလည်း အကွာအဝေးအတိုင်းအချိုးချိုးပါမူ ငါတို့သုံးရမဲ့ရေကငါးမူးပိုက်ကလာတဲ့ရေပဲ သို့သော်တွက်ကြည့်ပြီးကျသင့်ငွေများတော့သဘောမတူကြပြန်ဘူး
ဒီတော့ ဘယ်လိုမှညှိမရလို့ ရွာဦးကျောင်းဘုန်းကြီးက မောင်ရင်တို့ဖာသာ လုပ်ချင်တာလုပ်တော့ဆိုပြီးဝင်မပါတော့ပါဘူး
ဒီတော့မှပုံပါအတိုင်း မြင်ရသည့်အတိုင်း ရေကန်ကိုငါးမူးပိုက်များဝိုင်းဖောက်ရေသွယ်ပြီး ကိုယ့်အိမ်လိုင်းကိုယ်သွယ်သုံးကျပါတော့တယ် တလခန့်အကြာ ဇတ်လမ်းစပါပြီ ရပ်ကွက်ရုံးမှာ စကားများကျ ရန်ဖြစ်ကျ တုတ်ဒါးဆွဲပြီး တွယ်ကျတော့မယ်ပေါ့
သူများအိမ်ရှေ့ရေဖြတ်ဆွဲတော့ ပိုက်ကွဲ ရေမရ
ကိုယ့်ရေမရတော့ ဘယ်သူ့လိုင်းမှန်းမသိ ဖြတ်ဆက်ပြီသွယ်ပါလေရော (မန်တလေးမြို့ထဲက ကြိုးဖုန်းများကို တလိုင်းပြင်
ဘယ်ပိုက်ကဘယ်သူ့ဟာမှန်မသိတော့ ဦးသူကိုယ့်ဟာလုပ်ပြီး ရေရအောင်ကြံကျရင်းဖြင့် တရွာလုံးနည်းပါး ရန်ဖြစ်စကားများကြကာရန်သူတစိမ်းပြင်ပမှာ ရန်ဆောင်နေကျတဲ့အကြောင်းကြားသိရတော့ စိတ်မကောင်းလို့ ပုံရိုက်လာခဲ့တာပါ
တကယ်ဆိုဒီလိုကိစ္စလေးများအဘယ်ကဲ့သို့စီမံခန့်ခွဲ့သင့်သလဲဆိုတာ fb မိတ်ဆွေများသိပါတယ်
ညဏ်ပညာအမျှော်အမြင်ဖြင့်ဦးဆောင်သူရယ် အများအတွက်ဆို အကြံပေးပြီးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဆာင်ရွက်လိုသူရယ် များဖြင့် ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ကျမယ်ဆိုရင်ဖြင့်
အော် အဝေးသွားကြည့်စရာမလို ပါဘူး လို့
kai says: ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ
ထွေအုပ် ရဲတပ်ဖွဲ့ အကျဉ်းဦးစီး စသုံးလုံး
မီးသပ်တပ်ဖွဲ့ တို့ကို အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။
# RFA 28-8-2016